Tuesday August 20, 2019 - 10:12:49 in Wararka by Super Admin
Muxamed bin Cabdu Rahman Al-Thaani oo ah wasiirka arrimaha dibadda Qadar iyo wasiirka dekadaha ayaa lagu wareejiyay dhismaha mashruuca dekadda Hobyo.
Xasan Cali Kheyre iyo hoggaamiyaha maamulka Galmudug ayaa madashii kulanka ka sheegay in dowladda Qadar ay qaadatay qandaraaska dhismaha dekadda Hobyo.
Dhinaca kale Max'med Cabdullaahi Farmaajo oo ah hoggaamiyaha dowladda Federaalka ayaa isna xaqiijiyay in Qadar ay dhisi doonto dekadda Hobyo, arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli xukuumadda Dooxa ay dagaalka kala dhaxeeya xulufada Imaaraatka iyo Sacuudiga usoo rartay dalka Soomaaliya.
Qadar oo xurguf dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha ah kala dhaxayso Sacuudiga iyo imaaraatka ayaa dadaal dheeri ah ugu jirta sidii shirkadda DP World ay uga eryi laheed gobollada waqooyi Bari iyo waqooyi galbeed Soomaaliya.
Warbixin bishii lasoo dhaafay uu daabacay Wargeyska New York Timesayaa wajiga ka fayday damaca fog ee dowladda Qadar ka leedahay dekadaha Soomaaliya iyadoona qarax ka dhacay Boosaaso ay u adeegsatay kooxda Daacish garabka C/qaadir Muumin oo wada shaqeyn ay laleedahay.